WARBIXIN: Barcelona, PSG Mise Man City? Waatee Kooxda Xili Ciyaareedkan Ku Jirta Qaab Ciyaareedka Ugu Fiican Ee Isku Dheeliga Tirani? Halkan Kaga Bogo Xog Faah Faahsan. – GOOL24.NET
WARBIXIN: Barcelona, PSG Mise Man City? Waatee Kooxda Xili Ciyaareedkan Ku Jirta Qaab Ciyaareedka Ugu Fiican Ee Isku Dheeliga Tirani? Halkan Kaga Bogo Xog Faah Faahsan.
November 9, 2017 Mahamoud Batalaale
Xili ciyaareedkan kooxaha Yurub ayaan ku jirin xaalado isku mid ah waxaana qaab ciyaareed cajiib ah ku jira kooxo gaar ah oo ay ugu horeeyaan Manchester City, Barcelona iyo PSG laakiin iyaga laftooda ayaa ku kala duwan wax qabadka garoonka dhexdiisa gaar ahaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee lagu qiimeeyo in ay kooxihi ku jirto xaaladii ugu fiicnayd.
Guud ahaan kooxaha Manchester City, Barcelona iyo PSG ayaa ah saddexda kooxood ee xili ciyaareedkan bandhiga fiican ka samaynaya shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn waxayna saddexdan kooxood soo dhaliyeen isku darka 150 gool waxaana qaab ciyaareedka ugu fiican kaga soo jiray Cavani iyo Lionel Messi, laakiin xogta ayaa si gaar ah u garabsiinaysa kooxda Uniay Emery ee PSG taas oo xili ciyaareedkan ku bilaabtay qaab ciyaareedka fiican Man City iyo Barcelona.
Waxaa hadda lagu maqan yahay kulamada caalamiga ah waxaana jirta fursad si buuxda loogu heli karaa in xogtii kooxaha laga ururiyay lays barbar dhigi karo taas oo si buuxda loogu ogaan karo waxa ay soo qabteen kulaamdii ilaa hadda xili ciyaareedkan laga soo ciyaaray.
1-PARIS SAINT-GERMAIN :
Muhiimada kowaad ee kooxda PSG ee xili ciyaareedkan ayaa ah in ay markii ugu horaysay ku guulaysato koobka kooxaha Yurub ee Champions Leaque waana ujeedada wayn ee mashruuca uu Unai Emery hogaminayo laakiin waxay sidoo kale muhiim siinayaan sidii ay u soo ceshan lahaayeen koobka horyaalka Ligue 1 ee ay xili ciyaareedkii hore u lumiyeen AS Manaco.
Sababtii ugu waynayd ee ay PSG ula soo wareegtay Neymar Jr iyo Kylian Mbappe ayaa ahayd in ay sare u sii qaado horumarkii ay kooxdeedu soo samaysay sanadihii la soo dhaafay waxayna taasi sabab u noqotay in ayna ilaa hadda waxa guuldaro ah soo arag kulamadii horyaalka France iyo Champions Leaque iyada oo waliba guulo waa wayn soo gaadhay.
PSG ayaa ilaa hadda soo dhalisay 56 gool waxaana kooxdeeda laga soo dhalliyay 8 gool oo kaliya waxayna waliba PSG celcelis ahaan ay kulankiiba boosishanka soo haysatay boqolkiiba 61.3 % taas oo muujinaysa sida ay u soo dulaysay kooxihii ay la soo ciyaartay.
Cavani ayaa soo dhaliyay 17 gool oo tartamada oo dhan ah, Neymar Jr ayaa 11 gool ilaa hadda shabaqa ku gaadhay halka Mbappe uu leeyahay 6 gool iyada oo isku darka goolasha MCN uu yahay 34 gool. Kooxda PSG ayaa xili ciyaareedkan ah kooxda goolasha ugu badan ka dhalinaysa Champions Leaque iyada oo 21 kii daqiiqo ee ay garoonka ku jirtayba hal gool soo dhalinaysay waana 17 gool oo ay ku soo dhalisay afar kulan oo heerka gropuyada Champions Leaque ay ka soo ciyaartay laakiin waxaaba ka sii cajiibsan in aan wali hal gool PSG looga dhalin Champions Leaque xili ciyaareedkan!!.
Kooxuhu xili ciiyaareedkan lama tartami karaan Manchester City, waxaanad ka waraysan kartaa kooxaha Chelsea, Liverpool iyo Arsenal si la mid ah kooxihii ay kaga hortimid horyaalka Premier Leaque ama tartamada kale. Kooxda Guardiola ayaa ah kooxda labaad ee xili ciyaareedkan qaab ciyaareedka ugu fiican kaga jirta shanta horyaal ee Yurub ugu waa wayn.
Manchester City ayaa ilaa hadda soo dhalisay 52 gool waana heer gool dhalin celcelis ahaan ay kulankiiba ku soo dhalisay 3 gool, waxaana hirgalay oo ficil loo badalay hanaankii ciyaareed ee Guardiola uu guulaha badan ugu soo gaadhay kooxihiisii hore ee Barcelona iyo Bayern Munich kaas oo xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay fashil ku dhamaaday. Man City ayaa laga soo dhaliyay 10 gool waana in laba gool ka badan goolashii PSG laga soo dhaliyay halka goolasha ay dhalisay ay afar gool ka hooseeyaan kuwii PSG ay soo dhalisay.
Manchester City ayaa celcelis ahaan boqolkiiba 63.1% boosishanka ka soo haysatay kooxihii ay la soo ciyaartay waxayna taasi muujinaysaa in guulihii ay soo gaadhaysay ayna ku koobnayn kaliya goolal la soo dhaliyay balse ay sidoo kale awood ciyaareed soo bandhigtay.
Sergio Aguero iyo Raheem Sterling ayaa min 10 gool soo dhaliyay halka Gabriel Jesus uu 9 gool magiciisa ku soo qoray laakiin waxaa badan ciyaartoyda ku lug yeelanaya in ay shabaqa u soo taabtaan kooxda Guardiola waxaana ka mid ah Leroy Sane, De Bruyne iyo Silva.
Man City ayaa sidoo kale soo wada guulaysatay dhamaan kulamadii Champions leaque ee ay soo ciyaartay iyada oo 12 gool ku soo dhalisay 4 kulan waxaana laga soo dhaliyay 3 gool oo kaliya iyada oo xili horeba u soo baxday wareega 16 ka kooxood ee UCL.
Markii aan hal kubbad laysku taaban xili ciyaareedkan waxaa loo arkayay in Barcelona ay maamul ahaan iyo koox ahaanba ugu jirtay qalalaase waxay xili ciyaareedka ku bilaabtay laba guuldaro oo waji gabax ah oo ka soo gaadhay kooxda ay aduunka iskugu neceb yihiin ee Real Madrid oo koobka Spanish Super Cupka si sahlan uga qaaday.
Laakiin markaas wixii ka danbeeyay waxay Barcelona iska ilawday xaaladii ay ku jirtay waxayna u badashay xaalad aan la rumaysan karin oo ay ilaa maanta ugu jirto guuldaro la’aan. Kooxda Valverde ayaa noqotay kooxda saddexaad ee Yurub ugu bandhiga fiican xili ciyaareedkan waxaana ka horeeya PSG iyo Man City oo kaliya.
Barcelona ayaan 16 kulan wax guuldaro ah soo arag iyada oo waliba 41 gool ku soo dhalisay taas oo la micno ah in Balaugrana ay celcelis ahaan kulankiiba ka soo dhalinaysay 2.27 gool, laakiin tartamada oo dhan ayaa Barcelona looga soo dhaliyay 10 gool laakiin shan gool oo ka mid ah waxay la kulantay kulamadii Spanish Super Cup ee ay Real Madrid guuldarooyinka ay kala kulantay.
Lionel Messi ayaa sabab wayn u ahaa bandhiga cajiibka ah ee Barcelona isaga oo 16 gool ka soo dhaliyay tartamada oo dhan halka Luis Suarez uu ilaa hadda leeyahay 3 gool oo kaliya waana goolal la mid ah inta ay haystaan Paco Alcacer and Paulinho.
Barcelona ayaa hogaanka La liga ku haysa 4 dhibcood oo ay ka sarayso Valencia halka ay 8 dhibcood kaga taxadarayso halista kooxda ay sida tooska ah horyaalka ugu xifiltamaan ee Real Madrid waxayna kooxda Valverde hogaanka u haysaa Groupkeeda Champions Leaque waxayna Balaugrana xog ahaan wax yar uga hoosaysaa PSG iyo Man City.
Si kastaba ha ahaatee, kooxaha Manchester City, PSG iyo Barcelona ayaa si isku mid ah ugu raaxaysanaya qaab ciyaareed ayna haysan kooxaha kale ee Yurub, waxayna isku darsadeen gool dhalin badan iyo waliba in iyaga goolasha ugu hooseeya laga dhalinayo.